Hubka ay Iran geysay Yemen oo ku qulqulaya Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Hubka ay Iran geysay Yemen oo ku qulqulaya Soomaaliya
Hubka ay Iran u daad-gureysay Xutiyiinta Yemen, aya ku soo qulqulaya Soomaaliya, iyadoo ay soo baxeen warbixinno muujinaya in shabakado ka ganacsada hubka ay dalka si joogto ah u soo galiyaan hub sharci-darro ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dagaallada Sokeeye ee ka holcaya dalka Yemen ayaa horseeday loollanka Dowladaha Sucuudiga iyo xulafadiisa oo is-garabsanaya, taageerayana Dowladda Yaman ee caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan iyo Jamhuuriyadda Iran oo garab siineysa Xuutiyiinta ka soo horjeeda nidaamka Abdrabbuh Mansur Hadi.
Loollankaas, wuxuu sababay in labada dhinac ee maxalliga ah ee garab istaag dhanka hubka ah ka helaan Tehran iyo Riyaad, taas oo saameyn taban ku yeelatay Gobolka oo dhan, gaar ahaan dalalka dariska oo Soomaaliya ugu horreyso.
Cilmi-baaris ay sameysay Global Initiative, oo ah madal madax-banaan, xarunteeduna tahay Geneva, Switzerland, ayaa lagu sheegay in hubka ay Dowladda Iran ku daabushay Yemen uu ku qulqulayo Soomaaliya.
Global Initiative, waxa ay xustay in daraasad socotay muddo Sideddeed bil ah lagana sameeyay 13 goobood oo kala duwan, kuna yaalla Soomaaliya, lagu helay 400 oo ah nuuca hub ee Iran geysay Yemen 2018.
Sida lagu sheegay warbixintaan, hubka faraha badan ee ku qulqulaya Soomaaliya ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ammaanka guud ahaan dalka, oo ay ka howl-galaan kooxo ka soo hor jeeda Nimaadka Dowladnimada.
Colaadda Yemen oo toddoba sano jirsatay ayaa u dhexeysa dowladda caalamku aqoonsan yahay oo taageero ka helaysa xulafada milateri ee Sucuudigu hoggaaminayo iyo fallaagada Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto.
Dhibaatada bini’aadantinimo ee dalka ka jirta ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu darneyd, taasoo ay ugu wacan tahay gaajo baahsan, cudurro, iyo weerarro lagu hayo dadka rayidka ah.
Yemen waxa ay in badan la halgamaysay kala duwanaanshiyaha diineed iyo dhaqan ee u dhexeeya woqooyiga iyo koonfurta iyo dhaxalkii xumaa ee gumaysigii reer Yurub.